माधव पक्षबाट मन्त्री बन्नेको अन्तिम नामावली पुग्यो बालुवाटार ! को-को परे ? - Compaq News
माधव पक्षबाट मन्त्री बन्नेको अन्तिम नामावली पुग्यो बालुवाटार ! को-को परे ?
पटकपटक एमाले एकता भाडिदैँ आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । तर सो निर्णय लत्याउदैँ नेता नेपाल अघि बढेका छन् ।